China ọkọlọtọ ọkọlọtọ ndị nrụpụta ngwa ahịa TTO na ndị na-ebu ya | Baiyi
Aha aha: Standard rewindo na TTO ngwa nbipute
:Dị: BY-SR500-TTO / BY-SR500-UV / BY-HR450-UV
Njirimara:Ọ na-mepụtara maka iche iche nke labeelu na nkwakọ film chọrọ. Dị ka omenala labeelu-ebi akwụkwọ technology chọrọ na nzuzo na kpọọ atụmatụ, anyị gbalịrị iru ”otu igwe na ọtụtụ ngwa, ọ bụ uwe n'ihi na fim rewinding na labeelu si rewinding nakwa”. "Otu igwe nwere ọtụtụ ọrụ, ọ dabara maka ngwa obibi TTO na UV obibi akwụkwọ yana". "Otu igwe na ọtụtụ modular, modular na nhazi, ndị ọrụ nwere ike ịme nhọrọ modulu dịka mmepụta ha chọrọ". Ọ bụ ihe kasị mma nhọrọ maka labeelu na mpịakọta na ihe nkiri na mpịakọta si nzuzo.
Nke a nwere ọgụgụ isi-ebi akwụkwọ & rewinding usoro bụ kpọọ na mpịakọta, film na mpịakọta, akwụkwọ na mpịakọta, kpara labeelu na mpịakọta wdg ugbu ahịa si nzuzo chọrọ. Dị ka ihe dị na mpịakọta si rewinding & mmepụta atụmatụ na integrated iche iche nke ngwaahịa 'nzuzo technology. Chụ otu igwe maka ọtụtụ ebumnuche. - - ọ nwere ike iwunye TTO thermal printer na UV printer wdg. “Otu igwe nwere ọtụtụ ọrụ” —— mee ka ụdị teknụzụ dị mkpa n'ụdị ụlọ ọrụ. "Otu igwe na iche iche" --- na-aga n'ihu ma ọ bụ na-eri nri oge, usoro dị iche iche, ndị mmadụ nwere ike ịhọrọ nhazi ahụ dabere na nrụpụta ha chọrọ. Ọ bụ nhọrọ kacha mma maka ngwongwo. Dị ka ụlọ ọrụ chọrọ ugbu a na njirimara teknụzụ, ọ nwere ọkọlọtọ TTO na-emepụta ihe ọkụ ọkụ na-emegharị, mbipụta akwụkwọ UV na-edegharị, ọsọ ọsọ ọsọ. Ndị mmadụ nwere ike họrọ iji CIJ, ma ọ bụ TIJ ngwa nbipute, laser ebi, TTO thermal ngwa nbipute na UV obibi akwụkwọ usoro maka nzuzo dị ka nzuzo chọrọ.
"Ọkọlọtọ TTO thermal ebi akwụkwọ rewinder" na-mepụtara dị ka kwes ebi akwụkwọ technology atụmatụ, onwem na TTO ebi akwụkwọ ala na-ebi akwụkwọ arịọnụ mgbodo. HMI nakweere 7inch yi ihuenyo mmetụ ihuenyo, PLC na micro PC maka ịchịkwa. Dabere na ụdị ihe nkiri na aha njirimara na ọdịiche dị iche, ndị mmadụ nwere ike ịtọ oke ọrụ na HMI ma nyochaa ọnọdụ ọrụ ma nye mkpu. Rollingchịkwa sistemụ linear un-winding na asọfe esemokwu, ngwa ngwa / ngwa ngwa na-eweli, mechie-ala mgbochi, na-acha ọcha akara ma ọ bụ yi akara si na-akpali N'ịchọpụta, agụta wdg niile ọrụ, n'ezie ghọtara ọgụgụ isi akara.
““Kpụrụ obibi akwụkwọ UV ọkọlọtọ weghachite” mmepe bụ dịka njirimara teknụzụ nke UV si arụ ọrụ, ọ nwere ike iwunye sistemụ obibi akwụkwọ, plasma na LED gwọọ. HMI nakweere 7 nke anụ ọhịa yi ihuenyo mmetụ, PLC na micro PC maka njikwa. Dabere na ụdị ihe nkiri na aha njirimara na ọdịiche dị iche, ndị mmadụ nwere ike ịtọ oke ọrụ na HMI ma nyochaa ọnọdụ ọrụ ma nye mkpu. Rollingchịkwa sistemụ linear un-winding na asọfe esemokwu, ngwa ngwa / ngwa ngwa na-eweli, mechie-ala mgbochi, na-acha ọcha akara ma ọ bụ yi akara si na-akpali N'ịchọpụta, agụta wdg niile ọrụ, n'ezie ghọtara ọgụgụ isi akara. "Ntugharị ọsọ ọsọ dị elu" na-adabere na ọkọlọtọ ọkọlọtọ, ọsọ ọsọ na-abawanye nke ọma na ọsọ ọsọ nwere ike ịbụ 100m / min. ọ bụ nke oge pụrụ iche.
Nhọrọ ọrụ: ”auto dozie usoro“
1. ọkọlọtọ TTO thermal ebi akwụkwọ rewinder
2. ọkọlọtọ UV ebi akwụkwọ rewindi
3. ịgba ọsọ ọsọ ọsọ
A. akụkụ: L * W * H = 1200 * 1100 * 1200mm
B. aro: 300KG
C. voltaji: 220VAC 50 / 60HZ
D. ike: banyere 2KW
E. arụmọrụ: banyere 200pcs / min (ọ na-ewe ngwaahịa 100mm maka ntụaka, ọ na-metụtara na-ebi akwụkwọ ọsọ na ugboro.)
F. belt na-agba ọsọ: 2-60m / min (na-aga n'ihu mgbanwe)
G. dị ngwaahịa ngwaahịa: obosara ihe: 30-480mm, Max ihe n'obosara 500mm; Max arọ maka ihe onwunwe 50KG
H. mezie: kpuchie mezie (nhọrọ nhọrọ) na izi ezi bụ ± 0.25mm
I. moto: servo moto
J. dị ngwaahịa: BOPP, CPP, PITA, Pee, akwụkwọ, mejupụtara film, aluminized film wdg ihe na mpịakọta.
K. atọhapụ erughị ala akara: linear erughị ala akara
L. collection erughị ala akara: linear erughị ala akara
M. isi n'obosara: 3inch (76mm)
N. igwe: igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ carbon nchara na eserese (agba nwere ike ahaziri)
O. usoro nrụnye: ntinye nkwụnye n'ala, na-anọghị n'ịntanetị.
P. nhọrọ nhọrọ: usoro mmezi akpaaka.
A. akụkụ: L * W * H = 1600 * 1150 * 1070mm
B. aro: 800KG
E. arụmọrụ: banyere 100-1000pcs / min (ọ na-ewe ngwaahịa 100mm maka ntụaka, ọ na-metụtara na-ebi akwụkwọ ọsọ na ugboro.)
F. belt na-agba ọsọ: 10-100m / min (na-aga n'ihu mgbanwe)
G. dị ngwaahịa: obosara ihe onwunwe 30-440mm, max ihe n'obosara 450mm; Max ihe ibu 50KG
I. moto: otu moto ugboro
K. ịhapụ njikwa esemokwu: njikwa esemokwu mgbe niile
L. collection erughị ala akara: mgbe nile erughị ala akara
Nke gara aga: usoro nke ọgụgụ isi nri n'elu ikpo okwu
Osote: Standard nwere ọgụgụ isi kaadị nri igwe
usoro nke ọgụgụ isi nri n'elu ikpo okwu
KN95 / KF94face nkpuchi nri & ebi akwụkwọ syst ...